Ururka horumarinta soomalida itoobiya oo goobo caafimaad ka sameeyay dugsiyada waxbarashada ee caasimada deegaanka Jigjiga. - Cakaara News
Ururka horumarinta soomalida itoobiya oo goobo caafimaad ka sameeyay dugsiyada waxbarashada ee caasimada deegaanka Jigjiga.
Ururka horumarinta soomalida itoobiya oo la aas aasay muddo 3 sano ka hor ah ayaa waxa uu guulo mug leh ka soo hooyay ujeedooyinkii iyo ahmiyadihii ay xukuumada deegaanku u aas aasay oo ahayad ka qayb qaatashada dhinacyada horumarka kor u qaadida koboca dhaqaalaah iyo arimaha bulshada DDSI.
Haddaba maareeyaha ururka horumarinta somalid itoobiya mudane Cabdirahmaan bootaan oo u waramayay warbaahinta DDSI ayaa si qoto dheer uga hadlay kaalinta uu ururka kaga jiro hirgalinta qorshayaasha horumarineed oo dhinac kasta leh.
Maareeyaha oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu si durugsan uga warbixiyay in ururka oo ka duulaya hirgalinta qorshayaasha u yaala ee dhinaca horumarka aas aasiga ah ee bulshada deegaanka si loo kobciyo helitaanka adeegyada ay bulshadu gaar ahaan dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo wax soo saarka beeraha ayaa waxa uu ka hirgaliyay dugsiyada caasimada deegaanka ee jijiga dhismayaasha goobo caafimaad.
Isaga oo hadalkiisa siiwata ayaa waxa uu meereeyuhu sheegay in ay goobahaasi caafimaadka oo laga hirgaliyay 5 dugsi oo iskugu jira dugsiyada hoose dhexe iyo sare loogu talagalay in ay adeega caafimaadka siiyaan ardayda waxka baranaysa dugsiyada waxbarashada ee magaalada jijiga wuxuuna sheegay in ay hada bixinayaan adeegii caafimaadka ee loogu tala galay.
Masuuliyiinta ugu saraysa xafiiska caafimaadka iyo waxbarashada DDSI ayaa si wayn u soo dhaweeyay talaabooyinka horumarineed ee uu qaaday ururka horumarinta soomalida itoobiya sida balaadhan ee uu xukuumada ugala qaybqaatanayo hirgalinta qorshayaasha horumarineed uu u yaala xukuumada